Iphansi liyinto yaphansi engelula ukwenza amaphutha ekwakhiweni nasekufaniseni, futhi kunezinketho eziningi zokwenziwa kwaphansi, ngakho-ke namuhla ngizokuthatha ukuthi uqonde ukuthi yiziphi izinhlobo zaphansi ezitholakalayo. Lo mbhalo uhlaziya ikakhulu izitezi ezine ezijwayelekile: I-Engineered Hardwood Flooring ...
Bekulokhu kunesisho embonini yezitezi esithi uhla lwamapulangwe “luyisitezi samaphoyinti amathathu nokufakwa kwamaphoyinti ayisikhombisa”, okusho ukuthi, ngabe ukufakwa kuhle noma cha kunquma u-70% wekhwalithi yaphansi. Ukusetshenziswa okungagculisi phansi kubangelwa kakhulu okungafanele ...
Busisa izwe lomama lichume futhi lichume! U-2021 yisikhumbuzo seminyaka eyi-100 kwasungulwa iqembu lamaKhomanisi laseChina. ...
Abakwa-Unilin baqala ukumboza okungangeni manzi i-Unicoat – Floor News
NgoJuni 9, 2021 [eBelgium] i-Unilin Technologies imemezele ukuthi ukumboza okungangenwa manzi phansi “i-Unicoat” kungumbono omusha wamalungelo obunikazi kwiphothifoliyo yawo yobunikazi. Le nkampani ithe i-Unicoat enamathela manzi yiyona evikela kakhulu ekuvuza kwamanzi futhi ivimbele ukulimala kwe-flo ...
Cishe ngoJanuwari kulo nyaka, izinkampani eziningi eziholayo zisayine izivumelwano zombukiso nalo mbukiso. Kodwa-ke, ngemuva kokuhlaselwa yilo bhubhane, iDOMOTEX ASIA ivumile ukuhlehlisela lo mbukiso kuze kube ngonyaka ozayo, odale izinkampani eziningi ezihola phambili kulo nyaka ...